PROJECT FREE TV – Biyacade
December 15, 2014 January 1, 2015 biyacade
link	PROJECT FREE TV
BIYACADE TV .
Biyacade tv waxaa ku socda howl uploading videos.
Waxaana ku soo bandhigi doonaa videos xiisa leh.
Biyacade tv waa barnaamij aan uga golleenahay in aan kor ugu qaadno musyaqbalka dhalin yarada soomaalida gaar ahaan waxaan ku soo bandhigi doonaa dhalin yaro ku nool dalka koonfur afrika kuwaasoo nolosha ka gaaray horumar qaarkoodna ay noloshu ku adkaatay.
Biyacade tv waxaad kala socon doontaan sheekooyin xiisa badan oo ka dhacday isla gudaha dalka soomaaliya hadii alle idmo.
Next Dal iyo dad is diiday